Dare reseneti rakapasisa bhiri reMOPO, iro riri kushoropodzwa nebato reMDC.
Dare reseneti rakapasisa manheru eChitatu bhiri remutemo wekuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana munyika, reMaintenance of Peace and Order Bill, MOPO.
Mutemo uyu uri kuda kutsiva mutemo wePublic Order and Security Act, POSA.
Mutemo wePOSA wanga uchishoropodzwa nemapoka akawanda munyika uchinzi unombunyikidza kodzero dzevanhu.
VaMwonzora vanoti kunyange hazvo bhiri iri rakapasa museneti nekuda kwehuwandu hwenhengo dzeZanu PF, bato ravo harisi kufara nezvimwe zvikamu zvirimo zvakaita sekuti munhu anenge anyorera mapurisa tsamba yekuazivisa nezvekuratidzira, ndiye anosungwa kana pakaita mhirizhonga, uyewo nyaya yekurambidzwa kwevanhu kutakura zvinhu zvakaita sematemo, mapadza nemakano.
Vanoti sebato, vanokwanisawo kuzopikisa mutemo uyu kuburikidza nekuenda kudare repamusorosoro, reConstitutional Court, kana uchinge wazosainwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kana zvavakati zvigadziriswe zvisina kuitwa.
Bhiri iri rakanga ratadza kutsigirwa nekomiti yeparamende inoona kuringana kwemitemo nebumbiro remitemo yenyika, yeParliamentary Legal Committee.
Komiti iyi yakanga yawana zvimwe zvikamu zvebhiri iri zvichityora bumbiro remitemo yenyika.
Asi komiti iyi inonzi yakazowirirana nezvakazogadziriswa izvo zvakaita kuti bhiri iri rapasiswe mudare reseneti zvechimbi chimbi.
Asi nhengo yecentral committee yeZanu PF, uye vaive mumiriri wePelandaba/Mpopoma muparamende, VaJoseph Tshuma, vanoti kupasiswa kwebhiri iri ndicho chimwe chezvakavimbiswa nehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa kuti ichabatanidza mitemo yenyika.
Vanotiwo vanoshamiswa nedanho reMDC rekuda kupikisa mitemo uyu mudare reConstitutional Court sezvo mutemo uyu wakatenderera muvanhu usati waenda kumatare eparamende.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti VaMnangagwa vanogona kusaina bhiri iri chero nguva.
Hurukuro naVaJoseph Tshuma